Izinzuzo nemizuzu yokusebenza njengomcwali wezinwele: konke mayelana nomsebenzi - Indlela yokuphila 2022
Izinzuzo nemizuzu yokusebenza njengomcwali wezinwele: konke mayelana nomsebenzi
Mayelana nesifiso soshintsho
Mayelana nemali engenayo
Umuntu ngamunye ubhekene neqiniso lokuthi ufuna ukushintsha okuthile empilweni. Umuntu ushintsha abayeni bakhe, umuntu izwe ahlala kulo, kanye nomsebenzi womunye umuntu.
Lapho uphelelwa amandla futhi uzwa sengathi umsebenzi wakho awusalethi injabulo, unquma ngezinyathelo ezinqala kakhulu. Ikakhulukazi lapho usemncane futhi kubonakala sengathi yonke into isengaphinda iphindwe izikhathi ezingaphezu kwesisodwa.
Abahleli be-"Edinstvennaya" babelana ngolwazi lwabo lokushintsha ubuchwepheshe ukuze uma kufika isikhathi esinjalo empilweni yakho, wazi ukuthi yini ongayilindela kulokhu noma lokho kukhetha.
Ngolunye usuku ekuseni ngavuka nginomuzwa wokuthi angisafuni ukubhala. Kwenzeka ukuthi ngesinye sezikhathi zokuphila kwami, kwadingeka ngibhale izihloko cishe izinsuku (ngaphandle kwehaba) ukuze ngondle ingane encane futhi ngiziphilele ngedwa.
Lapho isimo sizinzile futhi sengikwazi kakade ukuphumula, ukubhala izihloko kanye nakho konke okuhlobene nabezindaba, angikwazanga.
Okubalulekile: ochwepheshe bathi, ukuze ungashisi futhi ugcine isithakazelo ebhizinisini lakho, kufanele nakanjani uye eholidini izikhathi ezi-3 ngonyaka. Udinga ngisho nokuhlaba ikhefu uma uzwa sengathi usuzovutha.
Njengoba ngangihlale nginesithakazelo esihlokweni sobuhle, ngangithanda ukuhlola izinwele futhi ngingesabi ukuzidaya ngawo wonke umbala wothingo, nganquma ukuthi ngiyofunda njengomcwali wezinwele.
Yiqiniso, ngaleso sikhathi ngangiqinisekile ukuthi lokhu kwakuwumsebenzi omuhle kakhulu, owawuzongivumela ngolunye usuku ukuba ngivule i-salon yami futhi ngenze ibhizinisi elihle. Nakuba ngiqinisekile ngephuzu lokugcina ngisho namanje.
Ukuze ube ngumlungisi wezinwele, kufanele ufunde izinyanga ezingama-5-6. Yiqiniso, ngalesi sikhathi ngeke ube yi-super-pro, kodwa uzokwazi ukuthatha izinyathelo zakho zokuqala emsebenzini futhi ngeke usabe isikelo nezinwele. Kulabo abafuna ukufunda ukudaya izinwele zabo ngekhwalithi ephezulu, kuzodingeka wenze okwengeziwe.
Uma noma ubani ecabanga ukuthi umdwebi wezinwele uwumsebenzi walabo abangazange baphumelele ekusebenzeni ehhovisi, lokhu akulona iqiniso. Ukuze ube umlungisi wezinwele omuhle, ngaphandle kwesifiso, udinga ukufunda okuningi futhi utshale kuwe imali eningi. Ngoba othisha abahle babiza imali enhle.
Umsebenzi wezinwele ngokwawo uyamangalisa ngempela. Usuku lonke, wenza abantu babe bahle kakhulu futhi ubasiza ukuthi bazithande. Yebo, ngemva kokuqeda izifundo, ngaqasha indawo esaluni futhi ngaqala ukuthola amakhasimende ami. Izikhombisi-ndlela zami eziyisisekelo kwakuwukuqondisa kwe-keratin, ukufaka umbala kwezinwele nokubuyisela. Nakuba, yiqiniso, kwakukhona ukugunda izinwele.
Udinga ukuqonda ukuthi umenzi wezinwele akagcini nje ngokwenza imibala noma ukwenza isitayela, imvamisa amakhosi nawo asebenza njengezazi zokusebenza kwengqondo. Ngokuvamile, ngingabalula izinzuzo zalo msebenzi:
ukungabi nesithukuthezi, njengoba ubuchwepheshe buhlala buvela futhi udinga ukufunda njalo;
ukuxhumana okuningi nabantu abahlukene;
ithuba lokusiza abantu bafunde ukuzithanda;
ithuba lokuzakhela ibhizinisi lakho;
kulula ukuthola umsebenzi;
ikhono lokuzakhela uhlelo lwakho.
ngokuvamile abantu abafuni ukukhokhela izinkonzo;
ukusebenza emilenzeni, okuholela ezinkingeni zemithambo yegazi nemithambo yegazi;
imali engenayo engazinzile (uma usaqala);
Kumele kushiwo ukuthi imali engenayo yomdwebi wezinwele incike ekuhlangenwe nakho kwakhe, ithalenta namakhono. Ngakho-ke, kukhona amakhosi okudweba kwawo kubiza i-hryvnia eyizinkulungwane ezingu-2-3 futhi kukhona umugqa wabo amasonto ambalwa kusengaphambili, futhi kukhona labo abangenalo lo mugqa.
Uma sikhuluma ngomuntu oqalayo, khona-ke ekuqaleni uzobe elungele ukuthola i-hryvnia eyizinkulungwane ezingu-5-7. Futhi zilungiselele iqiniso lokuthi ikhasimende kuzodingeka liqongelele iminyaka.
Kunezinhlelo ezimbili zokusebenza: ukusebenza esaluni yobuhle, lapho inani lesheke elivela kuklayenti lihlukaniswa ngama-60 ngama-40 noma ama-70 ngo-30, lapho ama-60 no-70 ayingxenye ye-salon, futhi ama-40 no-30 yimali engenayo yenkosi. Uma i-salon ihlinzeka ngezinto zokwakha, ukuhlukaniswa kwezimali kungase kuhluke.
Noma ungaqasha isihlalo esaluni, njengosomabhizinisi futhi usebenze ngezinto zakho, namakhasimende akho kanye namanani akho. Yiqiniso, le nketho ifaneleka kakhulu kubadwebi abanolwazi.
Kuyathakazelisa: abafana abafuna ukuphumelela ekwenzeni izinwele bakwenze. Yebo, azibi ngaso sonke isikhathi izinkanyezi. Kodwa kule ndaba, ukuphikelela kanye nesifiso sokufunda kubaluleke kakhulu.
Yebo, ekupheleni kwezifundo zami, ngacelwa ukuba ngibhale komagazini abambalwa ngesihloko sezinwele, futhi ngavuma. Kuvele ukuthi ngemuva kwesigamu sonyaka sekhefu, waqala ukuphuthelwa yizincwadi.
Ngabe sengihlanganisa isikhathi esithile, futhi ngenxa yalokho ngabuyela ebuntathelini, ngoba awukwazi ukubalekela kude nobizo lwenhliziyo yami. Nakuba, kumelwe ngivume, ngezikhathi ezithile ngiyajabula ukudaya amakhasimende ami noma ngiwasize abuyisele izinwele zawo. Kodwa manje sekuwukuzilibazisa nje.
Okubalulekile: izazi zokusebenza kwengqondo zithi uma ufuna ukushintsha umsebenzi wakho, zibeke engozini yokuwenza, ukuze kamuva awusoze wazisola ngokuthi uphuthelwe ithuba. Kungenzeka ukuthi isikhathi sokutubeka sizophela futhi uzobuyela ebhizinisini lakho, uthole ulwazi olusha. Noma mhlawumbe uzoqala impilo entsha ngokuphelele. Kwazi bani.
Odinga ukukwazi mayelana nezinqubo ze-laser ukuze ungalimazi impilo yakho: izincomo zedermato-oncologist
Ukwelashwa kwe-Laser kungabizwa ngokuphephile ngokuthi ukukhetha kwabantu abaphelele. Kodwa ukuze uthole umphumela oyifunayo kusuka ku-laser face resurfacing noma ukukhishwa kwezinwele ze-laser, kuyadingeka ukulungiselela kahle isikhumba
4 izinganekwane ezidumile mayelana nama-antidepressants
Kunezinganekwane eziningi mayelana nama-antidepressants, ngenxa yalokho labo abayidinga ngempela le mithi abakwazi ukunquma ukuqala ukwelashwa. Kanye nochwepheshe sichitha izinganekwane ezivame kakhulu ngama-antidepressants
Ukwelashwa kwe-Microcurrent: konke odinga ukukwazi mayelana nobuso bakho
Ukwelashwa kobuso kwe-Microcurrent kuyindlela esemqoka yokuthinta kahle izicubu kusetshenziswa amandla ashukumisayo abuthakathaka alingisa imisinga kagesi yemvelo yomzimba wethu. Funda konke mayelana nezinzuzo kanye nokuphikisana kwe-microcurrent therapy
Indlela yokushisa ilanga ngendlela efanele ngaphandle kokulimaza isikhumba sakho: imibuzo engu-7 nezimpendulo mayelana nama-sunscreens
Ingabe uyaphupha ngokuthola i-tan elinganayo futhi enhle ngaphandle kokulimala empilweni yakho? Kodwa awazi ukuthi ungawukhetha kanjani umkhiqizo ofanele wokuvikela ilanga futhi ugcine ukugqama kwakho isikhathi eside. Siyazi ukuthi singayithola kanjani i-tan elinganayo futhi enhle ngaphandle kokulimala empilweni